အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအရမ်းများသွားတဲ့ သန္တာဗိုလ်ရဲ့ အမိုက်စား အကဗီဒီယို – Online News Post
အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအရမ်းများသွားတဲ့ သန္တာဗိုလ်ရဲ့ အမိုက်စား အကဗီဒီယို
မင်းသမီး ချောလေး သန္တာဗိုလ် ကတော့ ဖြူဖွေးဝင်းဥ တဲ့ အသားအရေလေးနဲ့ အတူ သွယ်လျ လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ မိန်းကလေး အချင်းချင်း ငေးကြ ည့် ရေ လာက်အောင် ကို လှနိုင်လွန်းတဲ့ သန္တာဗိုလ် က ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး အထိ အပြစ် ပြောစရာမရှိ လောက်အောင် ကို ပြည့်စုံလွန်းသူလေး ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သန္တာဗိုလ် က သူမနဲ့ လိုက်ဖက် တဲ့ ဖ က်ရှင်လေးတွေ ကို ရွေးချယ် ဝတ်ဆင်တတ် တာကြောင့် လူအများကြား မှာ အမြဲတမ်းပေါ်လွင် နေတာ ဖြစ်ပါ တယ် … .
အရပ် ရှည်ပြီး Body လှတဲ့ သန္တာဗိုလ် က မိမိ မိုက်မိုက် စတိုင်လ်နဲ့ ကြွေချင် စရာကောင်းနေ တဲ့ မိန်းမလှလေး တစ်ဦးဆိုရင် လည်း မမှားပါဘူး နော် ။ သန္တာဗိုလ် က သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကို ကြိုး စားပမ်း စား လုပ်ကိုင် ခဲ့သလို အကနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ဝါသနာ ပါတာကြောင့် အပျော်တမ်း ဗီဒီယိုလေးတွေ ကို ရိုက်ကူး လေ့ ရှိတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သန္တာဗိုလ် က ရေပန်းစား နေတဲ့ Tik Tok အ ကတွေ ကို အမိုက်စား ကပြတတ် သလို အခုလည်း ဗီဒီယို အသစ်လေးတွေ ရိုက်ကူးပြီး တင်ထား တာ ဖြစ်ပါ တယ် … .
ဒီဗီဒီယိုလေး မှာတော့ ဘေးက လူက အတင်းတွန်း ထုတ်ပြီး ကခိုင်းတာ ကြောင့် သန္တာဗိုလ်က မကချင် ကချင်နဲ့ပဲ အကွက်ဆန်းတွေ ထုတ်ပြလိုက် တာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ကိုယ်လုံးလေး ကို အားရပါးရ လှုပ်ခါ ပြီး အပီအပြင် ဒွန့်ပြနေတဲ့ သန္တာဗိုလ်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတော့ ခဏခဏ ပြန်ကြည့်ရလောက်အောင် ကို အမိုက်စား ဖြစ်လို့ နေတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ်တွေ အတွက် မင်းသမီး ချောလေး သန္တာဗိုလ်ရဲ့ Tik Tok အက ဗီဒီယိုလေး ကို ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ် နော် … .
source & video credit : Thandar Bo ’ s Tik Tok Acc
crd : mmload
မင္းသမီး ေခ်ာေလး သႏၲာဗိုလ္ ကေတာ့ ျဖဴေဖြးဝင္းဥ တဲ့ အသားအေရေလးနဲ႔ အတူ သြယ္လ် လွပတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေလး ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ ထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ မိန္းကေလး အခ်င္းခ်င္း ေငးၾက ည့္ ေရ လာက္ေအာင္ ကို လွနိုင္လြန္းတဲ့ သႏၲာဗိုလ္ က ေခါင္းအစ ေျခအဆုံး အထိ အျပစ္ ေျပာစရာမရွိ ေလာက္ေအာင္ ကို ျပည့္စုံလြန္းသူေလး ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သႏၲာဗိုလ္ က သူမနဲ႔ လိုက္ဖက္ တဲ့ ဖ က္ရွင္ေလးေတြ ကို ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္တတ္ တာေၾကာင့္ လူအမ်ားၾကား မွာ အျမဲတမ္းေပၚလြင္ ေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
အရပ္ ရွည္ၿပီး Body လွတဲ့ သႏၲာဗိုလ္ က မိမိ မိုက္မိုက္ စတိုင္လ္နဲ႔ ေႂကြခ်င္ စရာေကာင္းေန တဲ့ မိန္းမလွေလး တစ္ဦးဆိုရင္ လည္း မမွားပါဘူး ေနာ္ ။ သႏၲာဗိုလ္ က သ႐ုပ္ေဆာင္ အလုပ္ကို ႀကိဳး စားပမ္း စား လုပ္ကိုင္ ခဲ့သလို အကနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ဝါသနာ ပါတာေၾကာင့္ အေပ်ာ္တမ္း ဗီဒီယိုေလးေတြ ကို ရိုက္ကူး ေလ့ ရွိတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သႏၲာဗိုလ္ က ေရပန္းစား ေနတဲ့ Tik Tok အ ကေတြ ကို အမိုက္စား ကျပတတ္ သလို အခုလည္း ဗီဒီယို အသစ္ေလးေတြ ရိုက္ကူးၿပီး တင္ထား တာ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
ဒီဗီဒီယိုေလး မွာေတာ့ ေဘးက လူက အတင္းတြန္း ထုတ္ၿပီး ကခိုင္းတာ ေၾကာင့္ သႏၲာဗိုလ္က မကခ်င္ ကခ်င္နဲ႔ပဲ အကြက္ဆန္းေတြ ထုတ္ျပလိုက္ တာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ကိုယ္လုံးေလး ကို အားရပါးရ လႈပ္ခါ ၿပီး အပီအျပင္ ဒြန႔္ျပေနတဲ့ သႏၲာဗိုလ္ရဲ့ ဗီဒီယိုေလးေတာ့ ခဏခဏ ျပန္ၾကည့္ရေလာက္ေအာင္ ကို အမိုက္စား ျဖစ္လို႔ ေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး သႏၲာဗိုလ္ရဲ့ Tik Tok အက ဗီဒီယိုေလး ကို ျပန္လည္ မၽွေဝေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ကြည့်ရှုသူတိုင်း ရင်တွေတုန်သွားစေမယ့် Mဆိုင်းလုနဲ့ မေတို့ရဲ့ ရေကူးကန်ထက်က အမိုက်စားဗီဒီယိုလေး
Next post ပုံတင်ရင်းမပေါ်သင့်တာတွေ ပေါ်သွားလို့ ရှင်းပြနေတဲ့ မမဆောင်းရဲ့ အသံကြောင့်မျက်လုံးတွေပြူးသွားတဲ့ နိုင်လူရဲ့ Tik Tokဗီဒီယိုလေး